Ny fanjakana antonony - Church of God Switzerland of the World
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny fanjakana afovoany
Ny fanjakana mpanelanelana dia ny toetry ny maty mandra-pitsanganan'ny vatana amin'ny maty. Miankina amin’ny fandikana ireo andinin-tsoratra masina mifandraika amin’izany, ny kristiana dia samy manana ny fomba fijeriny momba ny toetran’io fanjakana manelanelana io. Misy andalan-teny milaza fa mahatsapa izany toe-javatra izany ny maty, ny hafa kosa maty ny fahatsiarovany. Ny Fiangonan’Andriamanitra Maneran-tany dia mino fa tokony hohajaina ireo hevitra roa ireo. (Isaia 14,9-10; Ezekiela 32,21; Lioka 16,19-31; 23,43; 2. Korintiana 5,1- faha-8; Filipianina 1,21-24; Epifania 6,9-11; Salamo 6,6; 88,11-13; 115,17; mpitoriteny 3,19- enina ambin'ny folo; 9,5.10; Isaia 38,18; John 11,11- enina ambin'ny folo; 1. Thessalonians 4,13- iray).
Ahoana ny momba ny "fanjakana manelanelana"?
Taloha isika dia matetika no tsy nandray an-tanana ilay antsoina hoe "fanjakana manelanelana", izany hoe tsy mahatsiaro tena ny olona iray na tsy mahatsiaro tena eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'ny maty. Saingy tsy fantatsika. Nandritra ny tantaran'ny Kristiana, ny ankamaroany dia nihevitra fa aorian'ny fahafatesana, ny olona dia minia miaraka amin'Andriamanitra na sazy am-pototra. Ny hevitry ny vitsy an'isa dia fantatra amin'ny hoe "matory fanahy".
Raha mandinika ny soratra masina isika dia hitantsika fa tsy manolotra fiheverana tena azo antoka ny fanjakana manelanelana ny Testamenta Vaovao. Misy andinin-teny sasany izay miseho fa tsy mahatsiaro tena aorian'ny fahafatesana ny olona, ​​ary koa ny andinin-teny sasany izay miseho mba ho tsapan'ny olona rehefa maty.
Fantatry ny ankamaroantsika ny andinin-teny mampiasa ny hoe “matory” mba hilazana ny fahafatesana, toy ny ao amin’ny bokin’ny Mpitoriteny sy ny Salamo. Ireo andininy ireo dia nosoratana tamin'ny fomba fijery fenomenolojika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa mijery ny fisehoan-javatra ara-batana amin'ny vatana iray ianao dia toa matory ny vatana. Ao amin'ny fizarana toy izany, ny torimaso dia sarin'ny fahafatesana mifandraika amin'ny endriky ny vatana. Kanefa, rehefa mamaky andininy toy ny Matio 2 isika7,52, Jaona 11,11 ary Asa 13,36 rehefa mamaky dia hita fa mitovy ara-bakiteny amin'ny "matory" ny fahafatesana - na dia fantatry ny mpanoratra aza fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fahafatesana sy ny torimaso.
Na izany aza, dia tokony hojerentsika tsara koa ireo andininy izay manondro ny fahatsiarovan-tena aorian'ny fahafatesana. In 2. Korintiana 5,1-10 Toa manondro ny toetry ny mpanelanelana amin’ny teny hoe “tsy miakanjo” eo amin’ny andininy faha-4 sy ny hoe “mitoetra ao amin’ny Tompo” ao amin’ny andininy faha-8 i Paoly. Ao amin’ny Filipiana 1,21-23 Nilaza i Paoly fa “tombony” ny fahafatesana satria ny kristiana dia miala amin’izao tontolo izao “mba hiaraka amin’i Kristy”. Tsy toy ny tsy fahatsiarovan-tena izany. Hita ao amin’ny Lioka 2 koa izany2,43izay nilazan’i Jesoa tamin’ilay jiolahy teo amin’ny hazo fijaliana hoe: “Anio no hihaonanao amiko any am-paradisa”. Nadika mazava sy marina ny teny grika.
Ary farany, ny fotopampianaran'ny fanjakana manelanelana dia zavatra nofidin'Andriamanitra tsy hamaritana antsika ao amin'ny Baiboly amin'ny fomba marina sy amin'ny dogmatika. Angamba tsy takatry ny olombelona ny mahatakatra izany, na dia afaka manazava azy aza izy. Ity fampianarana ity dia azo antoka fa tsy fanontaniana hoe iza no tokony hiadian-kevitra sy harahin'ny Kristiana. Araka ny fanazavan'ny Rakibolana Evanjelika momba ny teolojia: "Ny tombantombana momba ny fanjakana manelanelana dia tsy tokony hampihena ny fahatokisana izay avy amin'ny hazo fijaliana na ny fanantenana ny fahariana vaovao."
Iza no te-hitaraina amin'Andriamanitra raha ao an-tsaina tanteraka amin'Andriamanitra izy taorian'ny fahafatesana, ary nilaza hoe: "Tokony tena hatory aho mandra-piverin'i Jesosy - nahoana aho no tena mahatsiaro tena?" Ary mazava ho azy, raha tsy mahatsiaro tena isika, dia tsy ho afaka hitaraina. Na ahoana na ahoana, dia hiaraka amin'Andriamanitra isika amin'ny fotoana mahatsiaro aorian'ny fahafatesana.